बीमा एजेण्टले पैसा कसरी कमाउँछन् ? – HamroKatha
बीमा एजेण्टले पैसा कसरी कमाउँछन् ?
बीमा एजेण्ट बन्ने प्रयासमा
मानौँ कसैले १ करोड रुपैयाँको १५ वर्षका लागि बीमागर्‍यो भने उसले वार्षिक सालाखाला ७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम बापत बुझाउनु पर्छ । ग्राहकले पहिलो वर्ष बुझाएको प्रिमियमको करिब २५ प्रतिशत रकम एजेण्टले पाउँछन्, कर कटाएर । अर्थात् १ करोड रुपैयाँको ईन्स्योरेन्स गराउँदा एजेण्टले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् ।
हाम्रो कथा २०७६ साउन २१ गते १७:५७
तस्बिर श्रोत : cloudcomputing-news.net
ईन्स्योरेन्स एजेण्ट अर्थात् बीमा अभिकर्ता बनेर करोडौँ कमाउनेहरू धेरै हुन्छन् । खासमा भन्ने हो चाल पाउनेहरू मात्र बनेका छन् बीमाअभिकर्ता । खासमा यो पेसामा कमाई हुन्छ कसरी ?
यस्ता एजेण्टहरू भनेका ईन्स्योरेन्स कम्पनीका राजदूतहरू हुन् । जसले ती सम्बन्धित कम्पनीहरूको बीमापोलिसी ग्राहकसम्म पुर्‍याउने काम गर्छन् । यस्ता एजेण्टहरूले बीमा पोलिसी बेचे बापत निश्चित रकम ईन्सेन्टिभ पाउँछन् ।
मानौँ कसैले १ करोड रुपैयाँको १५ वर्षका लागि बीमागर्‍यो भने उसले वार्षिक सालाखाला ७ लाख रुपैयाँ प्रिमियम बापत बुझाउनु पर्छ । ग्राहकले पहिलो वर्ष बुझाएको प्रिमियमको करिब २५ प्रतिशत रकम एजेण्टले पाउँछन्, कर कटाएर । अर्थात् १ करोड रुपैयाँको ईन्स्योरेन्स गराउँदा एजेण्टले १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ कमिसन पाउँछन् । त्यस्तै दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत र तेस्रो वर्षदेखि १० औ वर्षसम्म ५ प्रतिशतका दरले कमिसन आइरहन्छ । यसको अर्थ, आज १ करोड रुपैयाँको ईन्स्योरेन्स गराउँदा १० वर्षपछिसम्म पनि करिब ३५ हजार रुपैयाँ आइरहन्छ । एक हिसाबले यो पेन्सन जस्तै हो । र पेशाको मुख्य आकर्षण नै यही हो भन्दा हुन्छ ।
पछिल्लो समयमा एजेण्टहरू बिच तीव्र प्रतिस्पर्धा पनि चलिरहेको छ । जसका कारण एजेण्टहरु आफैले नयाँ नयाँ मार्केटिङ टुलहरू प्रयोग गरिरहेका छन् । पहिलो वर्षको कमिसन पुरै ग्राहकलाई छोडिदिने । धेरै प्रिमियम तिर्ने ग्राहकलाई वैकक, सिङ्गापुर जस्ता देशमा घुम्न पठाइदिने । उपहारहरू दिई ग्राहकलाई फकाउने काम पनि एजेण्ट हरूले गर्न थालेका छन् । जसलाई केहीले विकृति पनि भनेका छन् ।
भन्न खोजिएको कुरा, एक दिन राम्रो हुन्छ भन्ने सोचेर यो पेसा अँगाल्ने हो भने, जो कोही पनि सफल बन्न सक्छ । फेरि यो पेसा आफैमा विश्वमै पनि सम्मानित पेसा हो ।
अरूको जीवनमा भएको रिस्कलाई कभरेज दिलाउँदै आफूले पनि कमाई गर्ने पेसा हो । अर्थात् यो आम्दानी हुने सामाजिक काम हो । यो पेसा अँगाल्न हिचकिचाउनु जरुरी छैन । यदि यो पेसा अँगाल्न चाहनुहुन्छ भने यी टिप्सलाई सधैँ ख्याल गर्नुस् ।
१) ग्राहकको आवश्यकतालाई अगाडी राखौं
ग्राहकको आवश्यकतालाई ध्यानमा नराखी आयोग मात्रै कमाउन खोज्ने एजेण्ट व्यवसायमा धेरै टिक्न सक्दैन I जुन एजेण्ट ले आफ्नो ग्राहकको सबै कुराहरूलाई ध्यान दिएर भरोसा हासिल गरेर उनीहरूको माग पुरा गर्न सक्छ त्यो एजेण्ट ले सफलता हासिल गर्न सक्छ I
२) राम्रो ग्राहक सेवा
जब ग्राहकहरूले आफूलाई चाहिएको बेला आफ्नो एजेण्ट सँग सम्पर्क गर्न सक्छन् तब उनीहरू खुसी र आश्वासन हुने सम्भावना धेरै हुन्छ I जाँच र फोन कल गरेका ग्राहकहरूलाई समयमै प्रतिक्रिया दिनु अत्यावश्यक हुन्छ र तपाइले ज गर्छु भन्नु भएको छ त्यो गरेर देखाउन जरुरी हुन्छ अथवा गर्न नसक्नु भएको खण्डमा नसक्नुको कारण राम्रो हुनुपर्छ I जीवन बीमानीतिहरू खरिद गर्ने ग्राहकहरूको एक प्रमुख उजुरी भनेको उनीहरूले नीति खरिद गरिसके पछि उनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिनाकोलागी खोइ पनि हुन्नन् I
३) उच्च ऊर्जा स्तर
राम्रो बीमाएजेण्ट को सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण गुण भनेको उनीहरू सधैँ उत्साहित र उत्सुक हुन पर्छ I थकित स्वभावको एजेण्ट भयो भने तुरुन्तै ग्राहकहरू केही खरिद गर्नु बाट निरुत्साहित हुन्छन् I
यो सायद कुनै पनि राम्रो बीमाएजेण्ट को सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण गुण हो। यस क्षेत्रमा काम गर्नेले आफ्नो करियरको जीवनशैली दैनिक आधारमा तिरस्कार मुस्कानको साथ स्व्वेकार गर्न सक्ने सक्षम रहनु पर्छ I
राम्रो एजेण्ट ले केही बह्येमा सत्य कुरा बताएर ग्राहकहरूको सम्मान र विश्वास जित्न सक्छ I त्यसैले इमानदार हुन जरुरी हुन्छ I
६) प्राविधिक ज्ञान
राम्रो बीमाएजेण्टले नीति कसरी बेच्ने मात्रै हैन अरू धेरै कुराहरू जानेको हुनु पर्छ I एजेण्टले ग्राहकलाई बेचेको उत्पादनहरूको कर र कानुनी पक्षहरू र चाहिने सबै कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ I